शहीद पुत्र भन्छन् -बाबुराम अंकल, मेरो बाबाको आहुती के का लागि थियो ? | mulkhabar.com
June 12, 2016 | 4:50 pm 29825 Hits
म शहीद राममणी भट्टराईको छोरा । मेरो बुरालाई २०५५ सालमा तत्कालिन गीरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रीको पालामा पौष १३ गते लमजुङ्ग र गोर्खाको सिमानामा पर्ने चेपे खोला नजीक चक्रतिर्थ बाट गिरफ्तार गरी हत्या गर्यो ।
म बुबाको हत्या हुँदा जम्मा सात वर्षको थिएँ । स्कूल टाढा थियो । बुबाको हत्या भयो, म भन्दा माथि एक वर्ष जेठो दिदी हुनुहुन्छ, भाई तीन वर्षको थियो त्यतिखेर । हाम्रो परिवारको विचल्ली भयो । ममी केही गर्न सक्नुहुन्थेन । ममी रोगी हुनुहुन्छ । बुबा त्यतिखेर तत्कालिन नेकपा माओवादीमा हुनुहुन्थ्यो रे । पार्टीको राजनीति गर्दा गर्दे आफ्नो व्यवससाय पनि थियो त्यो छाडेर पूर्णकालीन हुनुभएछ । त्यतिवेला जे भयो । त्यो राज्यव्यवस्था परिर्वतन गर्ने भनेर बुबा लाग्नुभएको रहेछ । व्यवस्था नै परिवर्तनको लागि आफ्नो ज्यान को आहुती दिने कुरा मेरो बुबाको लागि स्वभाविक र राष्ट्रको लागि गौरबको विषय नै होला । भयो नै । मेरो बुबा लाई हत्या गर्न उक्साउने र गिरफ्तार गर्ने सबैको नाम मैले अहिले सार्वजनीक रुपमा भन्ने कुराले सामाजमा अर्को द्धन्द हुन सक्छ । त्यो विषयमा धेरै नभनौं ।
हाम्रा परिवारहरु के का लागि लडेका थिए रु गणतन्त्र स्थापना भएको छ, संविधानसभाबाट संविधान पनि बनिसकेको छ । हाम्रा बुबा र अभिभावकहरुले त्यसका लागि नै बलिदान गर्नुभएको थियो । हामीले बुबाको भौतिक माया र उपस्थिति त अहिले पाउन सकेका छैनौं तर उहाँको सपनामाथि पनि कुठाराघात गर्ने काम भएकोजस्तो लागेको छ ।
गणतन्त्र संस्थागत भइसकेको अवस्था छैन । हाम्रा बुबाहरुले बोकेर हिंडेका सपनाहरु पूरा होउन् हामी त्यही चाहन्छौं । माओवादी होस वा गैरमाओवादी वा विरोधी सबैका पीडित परिवारले उचित र समान संरक्षण र अधिकार राज्यबाट पाउनुपर्छ ।
गणतन्त्रको लागि संविधानसभाको लागि लागेका हाम्रा बुबाहरुजस्तै हजारौंको वलिदानले मात्रै यो गणतन्त्र आएको हो, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिकता र समावेशीता आएको हो ।
मेरो ममीलाई पनि तत्कालिन राजाको पालामा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेला २०५८ पौष २४ गते घरबाटै गिरफ्तार गर्यो । हामीलाई हुर्काउन र पाल्न अरुको काम गरेर ममीले बसीरहेको बेला घरबाटै विनाकारण गिरफ्तार गर्यो र यातना दियो । एक महिनासम्म वेपत्ता नै बनायो । म मामाघर गएँ पढ्न, मेरो दिदी र भाइलाइ अंकल र हजुरबुबाले हेर्नुभयो पालनपोषण गरेर संरक्षण दिनुभयो । ममीको अवस्था के थियो भन्ने थाहा थिएन ।
ममी आएपछि मात्रै ममी जिउँदो हुनुहुँदो रहेछ भन्ने थाहा भयो । यस्ता पीडाहरु हामीले धेरै भोग्यौं । गणतन्त्र आएर मात्रै हामीलाई केही हुँदैन जस्तो लाग्न थालेको छ । हिजो जनयुद्ध संचालन गर्ने र मेरा बाबाहरुजस्ता १७ हजारको ज्यान गुमाउन बाध्य पार्ने नेताहरु आज माओवादी छाडेर नयाँ शक्ति बनाउँदै हिँड्नुभएको छ । बाबुरामले हाम्रो सम्वोधन कसरी गर्नुहुन्छ ? प्रचण्डले शहीद परिवार र वेपत्ता परिवारको लागि गर्छु भन्नुभएको छ । उहाँ माओवादी आन्दोलनमै हुनुहुन्छ तर बाबुरामले छाडेर जानुभयो । उहाँ पनि प्रधानमन्त्री हुनुभयो, नेता हुनुभयो । बाबुराम अंकल हामी कसका हौं , हामीप्रति के तपाईको दायीत्व छैन ?
शहीद राममणी भट्टराईको छोरा